Shiinaha Cementitious-saareyaasha daahan gaddoonka xireyaashaba crystalline iyo Shirkado cusub | Hongyuan
Cementitious daahan xireyaashaba crystalline gaddoonka Waa ilaalinta cagaaran iyo deegaanka la muddada-dheer biyuhu, daxalka u adkaysta anti-gabowga iyo ilaalinta steel. Awood u leeyihiin in ay ka doodida jeer 2aad iyo is-hagaajinta. Fudud oo degdeg ah si aad u dalbato, non-wasakhaysan. Biogo TM Cementitious daahan xireyaashaba crystalline gaddoonka ah waa a daahan mealy cirro, la kiimikada ka kooban firfircoon ku daray oo cement caadiga Portland ku salaysan. Mabda 'tallaabo ay inta badan waa jawaabay on porosity, hoos ...
Waa ilaalinta cagaaran iyo deegaanka la muddada-dheer biyuhu, daxalka u adkaysta anti-gabowga iyo ilaalinta steel. Awood u leeyihiin in ay ka doodida jeer 2aad iyo is-hagaajinta. Fudud oo degdeg ah si aad u dalbato, non-wasakhaysan.
Biogo TM Cementitious daahan xireyaashaba crystalline gaddoonka ah waa a daahan mealy cirro, la kiimikada ka kooban firfircoon ku daray oo cement caadiga Portland ku salaysan. Mabda 'tallaabo Its waa inta jawaabay on porosity, hoos tallaabada oo biyo ah, Halabuurka kiimikada firfircoon soo dhex gelin karo dusha ka dibna oogaatid crystal beelaya, sida ettringite. The Halabuurka kiimikada firfircoon oo horumari karaa fuuq of sibidhka, ayaa samaynaya tiro badan oo kiristaalo in uu buuxiyo booska. Markaasuu biyo ma ka doodida karaa cement inuu ka hor tago ujeeddooyinka xireyaashaba.
Biogo TM Cementitious daahan xireyaashaba crystalline gaddoonka leedahay hanti wanaagsan keenidda, workability wanaagsan on diyaarad tixraaca siman, diyaarad tixraaca Burr, diyaarad tixraac ka baxsan, gudaha diyaaradda tixraaca, diyaarad tixraaca qalalan, diyaarad tixraaca qoyan ama diyaarad tixraaca gacanta ku biyo.
Sphere ee codsiga:
Waxaa si weyn loo isticmaali karaa in tunnel, xireenka, kaydka, warshad, warshadda nukliyeerka, munaaraddii qaboojinta, Viaduct, buundada, runway, aasaaska raso, xarunta daaweynta biyaha daata, injineernimada sokeeye iyo xireyaashaba kale dhismaha la taaban karo.
Previous: Buufin daahan Polyurea Elastomer Protection
Next: Buufin shinida caag Adkaan dhakhso daahan biyuhu
Double Qeybta polyurethane daahan biyaha
Mid ka mid ah Qeybta Polurethane daahan biyaha
polyurethane daahan biyaha
PU daahan biyaha
Single Qeybta polyurethane daahan biyaha
Single-Ply Roofing Membrane, TPO Dahaarka biyaha, Liquid Waterproofing, Looxa daahan biyaha, debecsan polymer-Cement daahan biyaha , Kashifay looxa daahan biyaha,
TPO Dahaarka biyaha, debecsan polymer-Cement daahan biyaha , Kashifay looxa daahan biyaha, Liquid Waterproofing, Looxa daahan biyaha, Single-Ply Roofing Membrane,